Blogs - Yoma Nadi Co.,Ltd. - Construction Company in Myanmar
Model Contest Form
Yoma Nadi Company Limited
မင်္ဂလာပါခင်ဗျ ကျွန်တော်တို့ Yoma Nadi Company Limitedမှ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Yoma Nadi Company Limited မှ Construction & Home Decoration Service များကိုလူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအတိုင်း အလှပဆုံး အဆောက်အဦ/နေအိမ်များကို မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံး P.A.E စနစ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကျွန်တော်တို့ Yoma Nadi Company Limited မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
လူတိုင်းလူတိုင်းမိမိတို့ နေထိုင်ရာနေရာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ကူးယှဉ်အိမ်မက်ထဲကအတိုင်း တည်ဆောက်ချင်ကြသည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်သည်။ သင်တို့၏ စိတ်ကူးယှဉ်အိမ်မက်ထဲကအတိုင်း ထပ်တူကြစေရန် ကျွန်တော်တို့ Yoma Nadi Company Limited မှ တာဝန်ယူကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ နေအိမ်၊ရုံးခန်း၊ဟိုတယ်၊ဆိုင်ခန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်းများအပြင်အဆောက်အဦးအမျိုးမျိုးကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းဖြစ်စေရန် နှင့် ခိုင်ခန့်သပ်ရပ်ပြီး ကျန်းမားရေးနှင့်ညီညွှတ်သော အဆောက်အဦးများဖြစ်စေရန် ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများဖြင့် ရေးဆွဲပြီး ကျွမ်းကျင်သော လုပ်သားများဖြင့် ဆောက်လုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အဆောက်အဦ/နေအိမ်အမျိုးမျိုးကို လှပဆန်းသစ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရန် အိမ်တွင်းအလှဆင်ခြင်း များကို ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်ချင်းပြည့်ဝသော ၀န်ထမ်းများဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ရိုးမနဒီကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
*ခိုင်ခန့်လှပ စိတ်တိုင်းကျစေရမည် ရိုးမနဒီ*
တိုက် ၃-၂၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာ(အောင်ဆန်းကွင်းအရှေ့ဖက်ခြမ်း)၊
ဖုန်း-09 5127790 ၊ 09955127790 ။ email: info@yomanadi.com
#construction #decoration #yomanadi
Yomanadi company is the best construction company in Myanmar.
COPY RIGHT © 2018 YOMA NADI COMPANY LIMITED.